FOTOAM-BITA NY FILOHAM-PIRENENA
Manoloana ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao, nanambara ny avy amin’ny KMMR sy ny Leagl Team, izay mpomba sy miaraka amin’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, fa tsy natao ho an’ny firenena sy ho an’ny vahoaka ny praiminisitra ankehitriny, Ntsay Christian. “Teny amin’ ny Kianjan’ny 13 Mai no nahafahana ...Tohiny
Zaza tsy manan-tsiny iray vao 9 volana monja no namoy ny ainy nandritry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany amin’ny lalam-pirenena mampitohy an’Antsirabe makany Morondava. Teo Tanambao Marofototra, efa hiditra an’ i Belo amoron’i Tsiribihina no nitranga ny loza, noho ny fivadihana fiara, omaly maraina tokony ho tamin’ny 5 ora ...Tohiny
Tsara fa tara ny fandraisana fepetra avy amin’ny minisiteran’ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana, manoloana ireo onjam-peo izay minia mandika lalàna sy miala amin’ny alalan’ny asa fanaovan-gazety. Ambaran’ny fampitandreman’ny minisiteran’ny Serasera mantsy, fa handray fepetra izy ireo manoloana ny fandranitana sy fihantsiana ary fitaritana korontana ataon’ireo onjam-peo ...Tohiny
« Ilay écran géant…! »
Noho ny fisian’ilay fahitalavitra lehibe nokasain’ny KMMR namoahana ny marina rehetra momba ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa no nahatonga ny Préfet n’Antananarivo nanao izay fomba rehetra nentina nanakanana ireo vahoaka tsy niditra ny kianjan’ny 13 Mai omaly. Nilaza mantsy ny Préfet fa azo natao ny hetsika raha tsy nasiana io ...Tohiny
On AiR Radio 100.8 F M